IINGCAMANGO ZEKHITSHI YETAFILE KUNYE NEEKHABHINETHI EZIMHLOPHE - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iingcamango zeKhitshi yeTafile kunye neeKhabhinethi eziMhlophe
Iingcamango zeKhitshi yeTafile kunye neeKhabhinethi eziMhlophe
Apha sabelana ngezimvo zetheyitile yekhitshi kunye neekhabhathi ezimhlophe zeendlela ezahlukeneyo zoyilo.
Iikhabhathi ezimhlophe lukhetho olulula kuba ziya kuhambelana malunga nayo nayiphi na imiphezulu yeetafile zombala, ke awubambeki ebhokisini xa kufikwa ekukhetheni ezinye ezigqityiweyo ekhitshini. Iikhabhathi ezimhlophe zixhaphake kakhulu kwaye zinikezela ngeendlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo kuyilo lwakho lwekhitshi.
Yahlukile iintlobo zemiphezulu yeetafile ekhitshini zinokudityaniswa nekhabhathi ezimhlophe ukubanika ubuhle obuthile kwisithuba ngokuxhomekeke kwisitayile osifunayo. Apha ngezantsi sabelane ngezona ndlela zidumileyo zokudibanisa imiphezulu yeetafile kunye neekhabhathi ezimhlophe.
Fumana ii-Countertops ezimnyama
Iitafile eziKhanyayo neziKhanyayo
Imibala yeCold Countertops
Mnyama & Mhlophe
Izinto zokwenza imiphezulu yeTafile yeeKlasikhi eziMhlophe zeKhabhinethi
Imiphezulu yeetafile zwi
Imiphezulu yeetafile zomthi
Ukongeza umahluko okhaliphileyo, omnyama kwiikhabhathi ezimhlophe kunika ukujonga okungathandekiyo. Umahluko wobumnyama nokukhanya ulungele ikhitshi yanamhlanje okanye yanamhlanje, kodwa ikwasebenza kwezinye iindlela.
Enye yeendlela ezilungileyo zokubopha iikhabhathi kunye neetafile kunye kukuba neetafile ezimnyama ezineswitch okanye imhlophe emhlophe ejikelezayo ebusweni ehambelana nekhabhathi emhlophe. Oku kunceda ezo ziqwenga ziphume kwimvelaphi emnyama yetafile.
Imiphezulu yeetafile emnyama inokuba yimibala epholileyo okanye efudumeleyo, enika iintlobo ezahlukeneyo zokusetyenziswa kwaye lukhetho oluqhelekileyo xa kufikwa kwiikhabhathi ezimhlophe. Bona eminye imizekelo amakhitshi amhlophe aneemitha zokubala ezimnyama Apha.
Njengombala omnyama okhankanywe apha ngasentla, ukhetho oluphezulu lokuphakama kukwafumaneka kwiitoni ezipholileyo nezifudumeleyo, ezibonelela ngokusetyenziswa okungapheliyo kunye nokudibanisa. I-Yellows, i-beige kunye ne-creams zonke zidityaniswa kakuhle nomhlophe ukunika ubuhle obuthambileyo nobushushu kwindawo.
Kupholile, ukungcola okukhanyayo kunye nabamhlophe abacocekileyo banokunika ukukhanya kunye nokubonakala okutsha ekhitshini. Ngale mibala ikhanyayo kulula ukongeza uyilo olugqityiweyo kwii-countertops, nokuba kukumnyama okumnyama okanye iziqwenga ze-aksenti kwiitafile, umhlophe unika isileyiti esihle esicocekileyo sobuchule bokuthatha.
Ukuhamba konke okumhlophe, okanye konke ukukhanya kunika ukubonakala komoya kunye nokuvula okuya kulungela inani leendlela ezahlukeneyo. Ukongeza i-veining ekhankanywe ngaphambili okanye i-flecks kwi-countertop iya kugcina imvakalelo evulekile kunye nokukhanya kwigumbi ngaphandle kwendawo evakalelwa kakhulu kwikliniki, okanye ukwazi ukubona nayiphi na into encinci yothuli okanye i-crumb. Ezi zifihliwe ngokulula ngamakhefu amancinci kwinto emhlophe emhlophe okanye ekhitshini elimhlophe.
Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili ukuba nekhabhathi emhlophe ’kuthetha ukuba ungakhetha phantse Nawuphi na umgangatho weemfuno zentliziyo yakho. Oku kubandakanya ukugxininisa iikhawuntara ngombala oqaqambileyo oluhlaza okwesibhakabhaka, ukumema okuluhlaza okanye okubambezela imiphezulu yeetafile ebomvu. Ukuya ngesibindi kunokuba yindawo yokujika yekhawuntari emnyama nemhlophe ekruqulayo, iklasi yokukhwaza kunye nokunethezeka.
Olu luvo loyilo olwenziwe ngcono njengokungaphantsi kwempembelelo kunye nokucinga ngakumbi ukuze uqiniseke ukuba ezinye izinto ezihambelana nekhitshi ziya kulungelelanisa. Ngeekhabhathi ezimhlophe ezikhanyayo ukhetho lwe-countertop oludlamkileyo lwenza konke ukuthetha ngelixa iikhabhathi nazo zingagqithisi indawo.
Umdibaniso wee-countertops ezimnyama nezimhlophe unokukunika nje umxube olungileyo wokwahlula uyilo lwakho lwekhitshi. Olu luyilo ludala umdla omkhulu wokubonakalayo kwaye lunokusetyenziselwa ukufezekisa uyilo lwendabuko olumnyama nomhlophe.
Isitayile esimnyama nesimhlophe setafile yetheyitile yeDallas inokubonelela ngomxube wokumema uyilo olumhlophe lwekhitshi.
Imiphezulu yeetafile engwevu ikhangeleka ngathi inesitayile xa idityaniswe nekhabhathi ezimhlophe kwaye zihlala zisetyenziswa kuyilo lwangoku kunye nolwanamhlanje lwekhitshi. Ezi countertops zingumthunzi ofanelekileyo wokuba ungaziboni zimnyama kakhulu. Kuba ingwevu ngumbala ongathathi hlangothi unokunceda nokuyila ikhitshi emhlophe eqaqambileyo kwaye incede ukuba ivele ngakumbi.
Kubalulekile ukuba umbala okhethwe ukuba ubhangqwe nekhabhathi emhlophe, kubalulekile nokuba kubalulekile. Ezinye zezinto ezikhoyo zifumaneka kuphela kwimibala ethile kwaye izinto ezahlukeneyo zineepateni zazo zendalo okanye ezenziwe ngabantu ezinxulunyaniswa nezinto eziphathekayo. Iikhabhathi ezimhlophe zinika iphalethi entle yokuxolela kule meko ke uninzi lwezinto onokukhetha kuzo zivumelekile ukudibanisa nazo.
I-slab ye-quartz yenye yezona zinto zifunwa emva kokugqitywa xa kufikwa kumba wee-countertops. Imiphezulu yeetafile zekartz Isibini esihle kunye neekhabhathi ezimhlophe ngombala okhanyayo omhlophe okanye ococekileyo omhlophe onamaqhuqhuva kunye nemithambo egcina indawo ingathathi cala kwaye yendalo. Ezi zinto zixhaphake ikakhulu kwiikhitshi zemveli.
Olunye lolona khetho luthandwayo ngamatye endalo imiphezulu yeetafile lenyengane . Granite njengamanye amatye endalo ezifana nezemarmore, zwi yomelele kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iintlobo imiphezulu yeetafile. I-Granite isesona sigqibo siphezulu ngenxa yemibala emininzi ekhoyo kunye nexabiso kunye nobuhle bendalo.
Ngelishwa izinto zelitye zendalo azizukukwazi ukuza ngombala omhlophe ococekileyo, ngenxa yendalo. Oko kwathiwa izixhobo zamatye zendalo ziza kwiindidi ezahlukileyo ezinokungena kuyilo onalo engqondweni. Bona eminye imizekelo iikhitshi ezineekhabhathi ezimhlophe kunye neetafile zegranite Apha.
Imiphezulu yeetafile yomthi iya kugxininisa iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini ngendlela eshushu. Ukongeza i-countertop yeenkuni kwenza indawo ibonakale isondele ngakumbi kwaye imema into eyahlukileyo kwizinto ezinokuba yikhabhinethi emhlophe yeklinikhi. Iikhabhathi ezimhlophe ezinomthi obeka imiphezulu yeetafile nkqu ngokwazo ngokulungelelanisa izinto zendalo nezenziwe ngabantu zesithuba.
Ezi zihlala zisetyenziswa ngokwesiko okanye Uyilo lwekhitshi ye-rustic . Kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba le mithi iyadibana neminye imithi ekhaya. Iinkuni zikwanika ukuziva okuthambileyo kwisithuba sendawo kuba isandi se-echos sincinci kumgangatho othambileyo womthi xa kuthelekiswa nomphezulu wamatye.
iindlela zokubaleka zothando phakathi kumbindi
ukuba wenzeni emva kweholideyini
uyisebenzisa nini i-ms ngokuchasene nokuphosa
I-avareji yeendleko zomcwangcisi womtshato
yintoni isikhumbuzo seminyaka engama-60 sitshatile